Madaxweynaha Puntland oo kulan la qaatay qaar ka mid ah Wasiirada DFS | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha Puntland oo kulan la qaatay qaar ka mid ah Wasiirada DFS
Madaxweynaha Puntland oo kulan la qaatay qaar ka mid ah Wasiirada DFS
Madaxweynaha Dawlad Goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa xalay kulan kula qaatay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah Wasiirada DFS.
Kulanka oo ka dhacay Hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay ka wada hadleen Madaxweynaha Puntland iyo Wasiirada DFS arrimo la xiriira xaaladda Guud ee dalka, wanaajinta xiriirka wada shaqayneed ee Wasaraddaha Puntland iyo kuwa DFS, Isxog waraysi, arrimaha Fadaraaliisamka iyo dhamaystirka Dastuurka DFS, ka xoraynta dalka xooxaha nabad diidka ah iyo arrimo kale oo muhiim ah.
Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in kulan kani noqonayo kii ugu horeeyey oo ay Muqdisho ku-yeeshaan Wasiirada Puntland iyo Wasiirada DFS, isla markaana ay ka wada hadlaan arrimo muhiim ah oo dan u ah shacabka Soomaaliyeed iyo Qaranka Soomaaliyeedba.
Sidoo kale Madaxweynaha Puntland ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in laga wada tashto ka xoreynta dalka kooxaha nabad diidka ah, madaama ay lid ku yihiin horumarka dalka, Nabadda, Xasiloonida iyo isu socodka dhammaan gobolada Soomaaliya, isla mar’ahaantaana ay taasi u baahan tahay in laga yeesho qorshe dhab ah oo lagu curyaamin karo laguna soo dabar jari karo cadawga shacabka Soomaaliyeed ee tabarka yar.
Dhinaca kale Madaxweynaha Puntland ayaa ku booriyey Wasiirada Puntland iyo Kuwa DFS ee uu kulanka layeeshay inay yeeshaan xiriir wada shaqayneed oo ku salaysan sidii Wasaarad walba oo DFS ahi ula yeelan lahayd Wasaaradaha dhiggeedaha ee ka jira dhammaan dawladaha xubnaha ka ah dawladda Federaalka Soomaaliya si loo horumariyo xiriirka wada shaqayneed ee Wasaaradaha dalka.
Ugu dambayn, Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa tilmaamay in Puntland diyaar u tahay midnimada shacabka Soomaaliyeed, wanaajinta xiriirka DFS iyo dawladaha xubnaha ka ah DFS gaar ahaan Puntland, ka qayb qaadashada horumarka Soomaaliya, nabadda iyo xasiloonida Qaranka Soomaliyeed.
Previous articleGuddoomiyaha Golaha Shacabka iyo wafdi uu hogaaminayo oo dalka dib ugu soo laabtay
Next articleHaween la baray farsamada gacanta si ay u maareeyaan noloshooda